Bitcoin Waa Sida Ciyaaraha | Exonumia
# Bitcoin Waa Sida Ciyaaraha
waxaa qoray @thebitcoinrabbi 2021/01/13open in new window
Marar badan waxaan la sharxaya sida #bitcoin u shaqeeyo oo waxaa baahsan ee macnaha guud ee ciyaarta isboortiga ah. Ayaan in ay ka caawisaa in ay ka jawaabaan badan oo su'aalaha caadiga ah:
Q: Yaa ikhtiraacay baseball?
A: Runtii waxba ma laha. Qof kasta oo dunida ka ciyaari karaan. Micno ma laha haddii hindisa asalka ah uu doonayo in uu beddelo xeerarka ama abaal isaga dhibcood ama wax kale. Ma daryeelo waxa uu u maleeyo in of our ciyaarta.
Q: Yaa ka masuul ah ee ciyaarta?
A: Qofna waa in lacag, waxaan oo dhan go'aansaday inu ka ciyaaro. Waxaan dhamaanteen ognahay oo la hirgeliyo xeerarka, iyo haddii qof calyanaqsiga, waxay heli haraatinayaan out of ciyaarta. Haddii qof iyaga abaal-marin ah naftooda dhibco, waxaan kaliya oo iyaga iska indha.
Q: Sidee ku ogaan sharciyada ma beddeli doonaa?
A: Kulligeen waxaan isku raacnay intii aan billownay ciyaaraha, cidkasta oo doonaysa inay ku sii ciyaarayso xeerarkaas waa sii socon doona, haddii cidi is badeli rabto, waxay u baahan tahay inay meel kale ku ciyaarto.
Q: Lama baangad karaa?
A: Wax walba waa meel fagaare ah la arki karo. Waxaan oo dhan ka arki kartaa duurka oo dhan iyo dhibcaha oo dhan. Haddii qof khiyaamayaan waan ognahay oo u sheeg in la lunsan doono.
Q: Maxay u qalantaa wax?
A: Waxaan dhamaanteen go'aansaday inay ciyaaraan, sidaas darteed waa wax inoo qalanta. Haddii qof doonayo inuu ku biiro, waxay yeelan doonaan inay ku heshiiyaan in ay garowsadaan dhibcood iyo qiimaha our.
Waan qiimeeyaa, Marka waxay leedahay qiimo. Qiimuhu waa shakhsi.
Q: Ma heli doonaa mamnuucay?
A: Balse waa laga yaabaa, dadka qaar ul ciyaaraya iyo kubbad oo aan cidna dhibin, sidaas darteed dowladu way ku baasan kartaa in ay ku baahato diinta, balse waxay ku mamnuuci kari waayeen fikradda ah in qori uu xidhiidh la yeeshay, ciyaartu waxay ku sii socon doontaa meel.
Q: Miyaan ku biiraa?
A: Samee waxaad rabto. Waxaan madadaalo kubadda iska ciyaarista, oo aad ku biiri karto ama aad HFSP karin.
← Bitcoin waa sida Fahamka Shabakadda Hillaaca iyadoo la adeegsanayo Abacus →